जूलियस कसरी प्रभावकारी मार्केटिंगको आरओआई बढाउँदैछ Martech Zone
इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग अनलाइन अधिग्रहणको सब भन्दा द्रुत बृद्धि गर्ने फाराम हो। त्यहाँ राम्रो कारण छ - भर्खरका तथ्या influence्कले प्रभावकारी मार्केटिंग अभियानहरूको आरओआई प्रमाणित गर्दछ: बत्तीस प्रतिशत उपभोक्ताहरूले प्रभावकार मार्फत गरेको सिफारिसलाई अनुसरण गर्न सक्दछन् र प्रत्येक $ १ एक प्रभावकारी मार्केटि returnsमा खर्च गर्दछ $ 1० त्यसैले कुल प्रभावकारी मार्केटिंग खर्च अनुमान गरिएको छ। लाई आगामी $ बर्षमा billion १ अर्ब डलरबाट -1-१० अर्ब डलर पुगेको छ.
तर आज सम्म बाध्यकारी प्रभावकारी मार्केटि। अभियानहरू कार्यान्वयन गर्न एउटा मेहनती, समय खाने प्रक्रिया छ। सर्वप्रथम, तपाइँले प्रभावकारीहरूको सूची सिर्जना गर्न सोशल मिडिया खाताहरू खोजी गर्न आवश्यक पर्दछ मई तपाईंको ब्रान्डको लागि राम्रो फिट हुन। त्यसपछि अनुसन्धान आउँछ कि उसका अनुयायीहरू को हुन्, उनले अरू कुन-कुन ब्रान्डले पोष्ट गरेको छ, प्रति पोष्ट सम्भावित लागत के हो, र यस व्यक्तिसँग कसरी सम्पर्क राख्ने भनेर जान्न। अन्तमा, तपाईले आफ्नो अभियानको प्रभाव नाप्न ट्र्याकि and र प्रक्रियाहरू सेटअप गर्नुपर्नेछ। यो एक मार्केटरको लागि पूर्ण-समय, स्प्रिडशिटले भरिएको भूमिकाको रूपमा समाप्त हुन्छ।
जुलियस ब्रान्ड र कम्पनीहरूको पालो कुञ्जी र सफल प्रभावकारी मार्केटिंग अभियान सुरू गर्न सफ्टवेयर समाधान हो। जूलियसले तपाईंलाई प्रभावहरू अनुसन्धान गर्न आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गर्दछ, तपाईंको सम्बन्धहरू सक्रिय र व्यवस्थित गर्नुहोस्, र डाटा एकै ठाउँमा राख्नुहोस्। यसले अमूल्य समय, ऊर्जा बचाउँछ, र सफल प्रभावकारी मार्केटिंग रणनीति सुरू गर्न वास्तविक-समय अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
जूलियसको साथ, तपाईं:
तत्काल विस्तृत डेटा पहुँच गर्नुहोस् जुन एक मार्केटिंग प्रोफेशनलले चाहिन्छ कि उनीहरूको ब्राण्डको लागि सबैभन्दा राम्रो किसिमको सिर्जना र प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ भन्ने बारेमा सूचित जानकारी लिनको लागि आवश्यक छ। Story०,०००+ प्रभावकारीहरूमा वास्तविक कथा फेला पार्नुहोस्। प्रभावकर्ताको बारेमा भर्खरको समाचार पोस्टहरू पढ्नुहोस्, उनको सामग्री शैली पहिलो-हेराइ हेर्नुहोस्, र तिनका श्रोता जनसांख्यिकीमा विस्तृत डाटा प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईं नौ सामाजिक मिडिया नेटवर्कको लागि एक प्रभावकर्ताको पहुंच र स engage्लग्नता मेट्रिक्स पनि देख्न सक्नुहुनेछ।
माइक्रो डाटा पोइन्टमा आधारित सहि प्रभावकारी पत्ता लगाउनुहोस्। यदि तपाईं मिडवेस्टमा ठूलो र व्यस्तको साथ कसैलाई फेला पार्न चाहानुहुन्छ भने, स्काइडाइभि for र तपाईंको बजेट भित्र मूल्य निर्धारणको लागि जोश? तपाईं यसको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। के तपाइँ प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड को प्रयोग गरिरहेको छ भनेर हेर्न चाहानुहुन्छ? तपाईं यसको लागि पनि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। जूलियसले डाटा प्रदान गर्दछ जुन सतहभन्दा पर जान्छ।
द्रुत, शिक्षित निर्णय लिन प्रभावकारहरूको तुलना गर्नुहोस्। साइड-साइड-तुलना तुलना तपाईं एकै ठाउँमा सम्भावित प्रभावकारहरू भेट्न, जोड्न, र छलफल गर्न सबै देख्नुहुन्छ।
कुनै अधिक चिसो कलिंग। कुराकानीहरू सुरू गर्नुहोस्, सम्पर्क जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्, र एक ठाउँमा संचार ट्र्याक गर्नुहोस्।
पूरा टोली संलग्न हुनुहोस्। सजिलैसँग कुराकानी र अभियान प्रगति दृश्यताका साथ टोलीहरूमा अभियानहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्। के काम गर्दैछ भनेर हेर्नका लागि तपाईका सहकर्मीहरूको अभियानहरू अनुसरण गर्नुहोस्।
प्रभावकारी मार्केटिंग उत्तम अभ्यासहरू
प्रभावकारी मार्केटिंगले कम्पनीहरूलाई सीधा, सटीक र रचनात्मक रूपमा उनीहरूको दर्शकहरूसँग संवाद गर्न सक्षम गर्दछ। सहि दर्शनको साथ सहि संयोजनले अभियानहरूको लागि बनाउन सक्दछ जुन निरन्तर उल्लेखनीय छ कि कसरी सफल र कम लागतमा उनीहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। मार्क गेर्सन, जुलियसका सीईओ।
केहि उत्तम अभ्यासहरूले निम्न समावेश गर्दछ:
तपाइँको सन्देश को लागी सही प्रभावकर्ता खोज्नुहोस्। सबैभन्दा सफल प्रभावकारी मार्केटिंग भनेको सेलिब्रेटीहरू तपाईंको उत्पादनसँग पोज गर्ने वा तपाईंको सेवाको बारेमा गलत प्रशंसा दिन मात्र होइन। यो तपाइँको ब्रान्ड वा कम्पनीलाई एक तरीकाले हाइलाइट गर्ने बारेमा हो कि वास्तविक र सकारात्मक रूपमा प्रभावकर्ताको दर्शकहरूको साथ प्रतिध्वनित गर्दछ। हेलो फ्रेश लेभराइज गरिएको रियलिटी स्टार अड्रिना पैट्रिजको स्थिति व्यस्त, नयाँ आमाको रूपमा उनीहरूको भोजमा इन-बक्स एक प्रामाणिक तरीकाले प्रदर्शन गर्न। उनले इन्स्टाग्राममा भनिन् कि चाँडो टेबलमा स्वस्थ खाना प्राप्त गर्न मद्दत गर्नु उनको र त्यहाँका अन्य कुनै पनि नयाँ आमालाई खाना पकाउने बारेमा हेरचाह गर्ने आश्चर्यजनक समाधान थियो। त्यो व्यक्तिगत तत्वले काम गर्दछ।
याद गर्नुहोस्, निष्ठा भनेको सबै कुरा हो। प्रायः उपभोक्ताहरू प्रायोजित पोष्टहरूसँग ठीकै हुन्छन् जबसम्म यो ब्रान्डको मानको लागि सत्य रहन्छ। वुन्डरम्यानका तारा मार्शले आगामी जुलियस पोडकास्टमा भनेजस्तै प्रभावकारी विपणन कम्तिमा भएको छ किनकि शाही परिवारले सयौं वर्ष अघि वेजवुड चीनलाई प्रभावकारी रूपमा समर्थन गर्‍यो। जस्तो कि शाही परिवार ठीक चीनको प्रामाणिक प्रभावकर्ता हो, ठीक छनौट गरिएको प्रभावकारीले लामो समयको लागि प्रमाणिक रूपमा ब्रान्डलाई छुट्याउन सक्दछ - जस्तो कि धेरै उदाहरण मध्ये नाइकेले माइकल जोर्डनसँग फेला पारेका छन। एक ब्रान्ड र एक प्रभावकर्ता बीचको व्यावसायिक सम्बन्धको उपस्थिति अभियानको प्रामाणिकताको लागि अप्रासंगिक हुन्छ - त्यो प्रभावकारको छनोट र उनीसँग रहेको रचनात्मक स्वतन्त्रताबाट निर्धारण हुन्छ।
सहयोगी हुनुहोस्। तपाइँको प्रभावकारी मार्केटिंग अभियानका लागि एक विशिष्ट दर्शन राख्नुहोस्, तर तपाइँको प्रभावकारको साथ सहि भाषा र प्रयोग गर्नका लागि फोटोहरूमा खुला रहनुहोस्। उनीहरूलाई उनीहरूका श्रोताहरू राम्ररी चिन्छन् र के जान्दछन् के सफल पोष्टले के राम्रो अर्थ राख्छ। आउँदै गरेको जूलियस पोडकास्टमा, हर्स्टका ब्रिट्नी हेन्सीले “स्केइकी क्लीन टेस्ट” को बारेमा बोलेकी छिन्। एक ब्रान्डले एक प्रभावकारलाई भन्न सक्नुहुन्न, "साघुँरो सफा" - तर यसको सट्टा प्रभावकारीलाई रचनात्मक इजाजतपत्र दिनु पर्छ जुन कुनै पनि हिसाबले उनीको लागि प्रामाणिक छ र उनको श्रोतालाई उत्तरदायी छ भनेर त्यस बिन्दु बनाउन।
प्रभावकारी मार्केटिंग सफलताका कथाहरू
जुली साना र ठूला कम्पनीहरूका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र प्रभावकारी समाधान हो जसले प्रभावकारी अभियानहरूको म्यानुअल प्रबन्धनको लागि प्रमुख गणनालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।
यसभन्दा पहिले, हामीले प्रभावहरू पत्ता लगाउन केवल गुग्लिंगमा भर पर्नु पर्‍यो र उनीहरूका सबै व्यक्तिगत सोशल मिडिया खाताहरूमा गएर सूचनाहरू खोज्न। जूलियस अमूल्य छ। मेघन काटुचि, एओएल / हफिंगटन पोष्टमा सामग्री रणनीतिकार
समय र जनशक्ति बचत गर्नु भन्दा पनि जूलियसले पनि आफ्नो अभियानको लागि उत्तम आरओआई फेला पार्न एकै पटकमा धेरै प्रभावकारीहरूसँग सक्रिय, परिक्षण, र पुन: परीक्षण गर्ने मार्केटरको क्षमतालाई तिव्र बनाउँछ। पहुँच स्पोर्ट्सको गुगल फोटो अभियानका लागि, उनीहरूले धेरै एथलीटहरू आफ्ना श्रोताहरूलाई संलग्न गराए जसले यो सन्देश फैलाउनको लागि कि Google फोटोहरू भण्डारण, खोजी, र क्याटलग तस्बिरको उत्तम र सजिलो तरिका होशट्याग # ईसिथ्रोब्याक प्रयोग गरेर गर्दछ। जुलियसको प्रयोग गरेर एकै पटकमा धेरै सम्झौताहरू पिच गर्ने र बन्द गर्ने क्षमताले कम्पनीको कामको समय घण्टा बचत गर्‍यो।
प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर हामीसँग अद्भुत सफलता दर रहेको छ, एकै पटकमा धेरै प्रभावकारी क्रियान्वयनहरू कार्यान्वयन गर्दै। बिल मीरा, एक्सेस स्पोर्ट्स मिडियाका सीईओ।
जूलियस आफैले प्रयास गर्नुहोस्!
टैग: प्रभावप्रभावप्रभावकारी सment्लग्नताप्रभावकारी विपणनप्रभावकारी मार्केटिंग रोईप्रभावशाली पहुँचjuliusलगानी फिर्तारय